Tenin'Andriamanitra Archives - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Perikopa FLM 3V4 – Oktobra Novambra Desambra 2020
Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Oktobra Novambra Desambra 2020 Indro atolotra antsika indray ny ity Perikopa ity, araka izay nandaharan’ny Fiangonana Loterana Malagasy azy. Marihina fa tsy ahitàna ny Filazantsara vakiana isan’alahady ity Perikopa ity. Ao amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana no ahitàna ireo vakiteny telo sy teny toriana mivoaka ho an’ny …
Perikopa FLM 3V3 – Jolay Aogositra Septambra 2020
Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Jolay Aogositra Septambra 2020 Indro atolotra antsika indray ny ity Perikopa ity, araka izay nandaharan’ny Fiangonana Loterana Malagasy azy. Marihina fa tsy ahitàna ny Filazantsara vakiana isan’alahady ity Perikopa ity. Ao amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana no ahitàna ireo vakiteny telo sy teny toriana mivoaka ho an’ny …
Perikopa FLM 3V2 – Apr. Mey. Jon. 2020
Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Aprily – Mey – Jona 2020 Indro atolotra antsika indray ny ity Perikopa ity, araka izay nandaharan’ny Fiangonana Loterana Malagasy azy. Marihina fa tsy ahitàna ny Filazantsara vakiana isan’alahady ity Perikopa ity. Ao amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana no ahitàna ireo vakiteny telo sy teny toriana mivoaka …
Perikopa FLM 3V1 – Jan. Feb. Mar. 2020
Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Janoary – Febroary – Martsa 2020 Indro atolotra antsika indray ny ity Perikopa ity, araka izay nandaharan’ny Fiangonana Loterana Malagasy azy. Marihina fa tsy ahitàna ny Filazantsara vakiana isan’alahady ity Perikopa ity. Ao amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana no ahitàna ireo vakiteny telo sy teny toriana mivoaka …
Perikopa Loterana 3V4 – Oct. Nov. Des. 2018
Perikopa Loterana, perikopa3, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Oktobra 2018 manontolo, sy ny volana Novambra 2018 manontolo, ary ny volana Desambra 2018 manontolo, eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).